Shiinaha Ss304 Qaniinyada Kubadda Valve Weelka Cabitaanka Ibta Naasaha Soo saaraha iyo Soo-saare |Marshine
Doofaarku markuu damco inuu cabbo, wuxuu riixaa mandrillka oo biyuhu waxay maraan farqiga qolofka, mandrill iyo kubbadda birta.Marka doofaarku joojiyo riixista, cadaadiska biyaha iyo miisaanka kubbadda birta iyo mandrill ayaa ka dhigi doona isku-xidhka adag, markaa biyuhu waxay joojin doonaan socodka isla markiiba.
Doofaarka noocaan ah wuxuu leeyahay awood sifeyn xoogan oo ciid ama wasakh kale.Cabitaanka ibta naasaha waa in ay yareeyaan cadaadiska marka la isticmaalayo, si looga fogaado qulqulka biyuhu si degdeg ah oo uusan doofaarku u cabbin.
Marka doofaarku damco inuu cabbo, waxay ku qabtaan cabbiyaha afka oo ay qaniinaan usha valve si ay biyuhu u sii maraan farqiga u dhexeeya furka valve iyo giraanta xidhitaanka.Marka doofaarku joojiyo qaniinyada, isha soo noqoshada ayaa dib u soo celin doonta usha waalka, farqiga ayaa mar kale la xidhay si loo joojiyo socodka biyaha.Cabbitaannada noocaan ah ayaa leh waxqabad wanaagsan oo xiran iyo biyo tartiib tartiib ah, oo ku habboon doofaarka in la cabbo.
Doofaar biyo-cabbiyeedka shinbiraha
1.The feature ugu weyn ee cabitaanka ibta doofaarka waa qaab-dhismeedka fudud.Waxa uu ka kooban yahay qolof, mandrill iyo kubbad bir ah.
2.Xagalka rakibaadda waa 45º-75º, iyo nadiifinta dhulka ee doofaarka waa 25-30cm, doofaarrada koraya (3-6 bilood jir) waa 50-60cm, doofaarrada qaangaarka ah waa 75-85cm.
Ku dheji isaga.
Nooca ibta naaska
1. Doofaarka biyaha la cabbo ibta ibta waxay ka kooban yihiin jirka birta ah, jirridda valve, filter.
2. Doofaarka biyaha la cabbo Qofka ibta naaska caba wuxuu siin karaa biyo nadiif ah oo nadiif ah doofaarka.
4. Tayo sare leh, waqti dheer oo shaqo ah, fududahay in la rakibo oo la isticmaalo.
5. Biyaha la cabbo doofaarka ibta naaska shaandhada caagga ah ee la hagaajin karo waxay ka hortagtaa wasakhda biyaha waana ay fududahay in la beddelo biyaha cadaadiska sare iyo hababka cadaadiska hooseeya.
Hore: Naxaasta Cabbitaanka Ibta Naasaha oo Toomaatig ah
Xiga: Makiinada Biyaha ee Doofaarka Tooska ah